Maaddaama aan ku mashquulsannahay kan dhabta ah, ma aha inaan awooddeena iyo tamarkeenna u siinno beenta.
Maqaallada ugu aqriska badan maalinta Axada, Juun 28, 2020. Sawirka: Maalinta.
Dooddu waxay kaliya horseedi doontaa jahwareer iyo calaamado su'aal ah oo ka badan qodobbada tilmaanta. Taas bedelkeeda, waa inaan awooddeena iyo tamarteena gelinaa siinta dunida Ciise Masiix.
Ka doodo qodobbada Knutby
Wargeyska maalinlaha ah ee Christian-ka waxa ku jira maqaallo badan iyo maqaallo dood ah oo ku saabsan wixii ka dhacay Knutby iyo sababta tan.
Maqaallada ugu aqriska badan "maanta" waa maqaallo dood ah oo kusaabsan Knutby oo ay qoreen qoraayaal kala duwan.
Laakiin muxuu qofku mid u gelinayaa xooggooda iyo tamarkooda tan? Dooddu waxay kaliya horseedi doontaa jahwareer iyo calaamado su'aal ah oo ka badan qodobbada tilmaanta.
Taas bedelkeeda, waa inaan awooddeena iyo tamarteena gelinaa siinta dunida Ciise Masiix.
Kaliya waan gaboobi doonnaa oo calaamad kasta oo su’aal ah lama toosinayo haddii aan ku mashquulno waxa aan naloogu yeedhin.
Vecka 25, tisdag 22 juni 2021 kl. 12:13